၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော MCU ချစ်ပ် များသည် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ သန်း ရှိသည် - Pandaily
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၏ ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော MCU ချစ်ပ် များသည် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ သန်း ရှိသည်
Jan 10, 2022, 19:32ညနေ 2022/01/10 23:32:06 Pandaily
တန လာ င်္ နေ့က တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီMidea Group သည် Investor Interactive Platform မှတစ်ဆင့် ကြေငြာ ခဲ့သည်၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ႏွစ္ ၀က္ မွာ ကြန္ပ်ဴတာ chip နယ္ပယ္ ကို ၀င္ေရာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ကုန္ ေတြကို အေျမာက္အျမား စတင္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဓိက ထုတ်လုပ် မှုမှာ MCU control chip ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှု ၁၀ သန်း ခန့်ရှိသည်။ အနာဂတ်တွင် ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ချစ်ပ် ထုတ်လုပ်မှု ကိုဆက်လက် တိုးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြား အိမ်သုံး ပစ္စည်း နှင့်ဆက်စပ်သော ချစ်ပ် ထုတ်ကုန် များဖြစ်သော power supply နှင့် power supply သို့ ၀ င်ရောက် မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Midea Group ၏ လက်အောက်ခံ Midea Innovation Investment Co., Ltd. သည် MR Semiconductor Ltd. (နောက်ပိုင်းတွင် MR Semi ဟုရည်ညွှန်း သည်) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သော ဉာဏ ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေး များနှင့်အတူ ချစ်ပ် R & D နှင့် ဒီဇိုင်း အတွက်အဓိက ပလက်ဖောင်း အဖြစ်, MR Semi ကွန်ပျူတာ ချစ်ပ် ၏ လယ်ပြင် ၌ Midea ရဲ့ ပထမဆုံး ကြိုးပမ်း မှု ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် Midea သည် Mr. Semi ၏ ၅၇. ၆၉ ၂၃% ကို သွယ်ဝိုက် ပိုင်ဆိုင်သည်။
၎င်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် အရ MR Semi သည် စက်မှုလုပ်ငန်း semiconductor ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ကိုအာရုံစိုက် သည့် IC ဒီဇိုင်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အိမ်သုံး ပစ္စည်း လုပ်ငန်း အတွက် ချစ်ပ် အမျိုးမျိုး ကိုထောက်ပံ့ ရန် အာရုံစိုက်သည်။ လက်ရှိတွင် MCU, IPM, PMIC နှင့် IoT နှင့်ဆက်စပ်သော IC ထုတ်ကုန် စီးရီး လေး ခုရှိသည်။ China Business Inquiry Platform Qicha မှ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ ကုမ္ပဏီ တွင် မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် ၂၆ ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၂၅ ခုနှင့် nbsp ၊ တီထွင် မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတို့အနက် ၃ ခုကို လိုင်စင် ချထား ပြီး ၂၂ ခုမှာ ထုတ်ဖော် ခြင်းသို့မဟုတ် ထိရောက်သော ပြန်လည်သုံးသပ် ခြင်း အဆင့်တွင် ရှိနေသေး သည်။
MR Semi ၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ Liu Kai က ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် သည် ချစ်ပ် သန်း ၈၀ ထုတ်လုပ် ရန်မျှော်လင့် ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့၏ ထုတ်ကုန် များသည် power chips, power chips, IoT chips နှင့်အခြား အိမ်သုံး ပစ္စည်းကိရိယာ များအတွက် full-chip အမျိုးအစားများကို ဖုံးလွှမ်း လိမ့်မည်။ သူက MR Semi သည်ကား ချစ်ပ် များကို တက်ကြွစွာ တပ်ဆင် လိမ့် မည်ဟုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Midea Group သည် chip layout ကို လောင်း ရုံ သက်သက် မဟုတ်ဘဲ ရှုထောင့် ပေါင်းစုံ မှ အားထုတ် သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:အမေရိကန် သည် ဂျာမန် ဘဏ္ card ာရေး ကဒ် ရှယ်ယာ များ ကိုအပြည့်အ ၀ ဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် နေသည်
2019 ခုနှစ်တွင် Midea ‘s Lot သည် HolaCon ကို အိမ်သုံး ပစ္စည်းများအတွက် စမတ် ချစ်ပ် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပြီး စျေးနှုန်း ချိုသာ သော စမတ် ဆက်သွယ်မှု module ကို HolaCon ချစ်ပ် များတပ်ဆင် ထားပြီး Midea မှထုတ်လုပ်သော စမတ် အိမ်သုံး ပစ္စည်းများ ကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Midea Group သည် Mideon Semiconductor Technology Co., Ltd. ကို ယွမ်သန်း ၂၀၀ ဖြင့် မှတ်ပုံ တင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကို Midea Group မှ အပြည့်အဝ ပိုင်ဆိုင်သည်။
၎င်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် အရ ကုမ္ပဏီ၏ စီမံကိန်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ IPM ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင်ပထမဆုံး ဖြန့်ချိ ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အကြီးအကျယ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင် IPM application စုစုပေါင်း ၁၇. ၅၈ သန်း အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီ တွင်အဓိက မူပိုင်ခွင့် ၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။ R & D အဖွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ အဖွဲ့ဝင် များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ထုတ်ကုန် ထုပ်ပိုး ခြင်း စမ်းသပ် အဖွဲ့ တပ်ဆင်ထားသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည် ၁၂ သန်းကျော် ရှိသည့် အလွန် မြင့်မားသော အလိုအလျောက် “ပစ္စည်း မှ အပြီးသတ် ထုတ်ကုန်” ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ယခုအခါ ကုမ္ပဏီ သည်အလွန် ပြောင်းလွယ်ပြင် လွ ယ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် နှင့် သတင်းအချက်အလက် အခြေပြု ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ များရှိသည်။